Vary mora: « Tsara kalitao ireo », hoy i Andry Rajoelina
lundi, 18 mars 2019 10:02
« Vary tena tsara kalitao ireo hatolotry ny fitondram-panjakana ireo na dia amidy amin’ny vidiny tena mora aza », hoy i Andry Rajoelina, teo amin’ny seranantsambon’i Toamasina nijery ny fahatongavan’ny vary mora 16 500 taonina avy any Pakistan.
Hanomboka amin’ity herinandro ity avy hatrany ny fitsinjarana azy ireo amin’ny Fokontany rehetra manerana ny lafivalon’ny Nosy, ho an’ny vahoaka Malagasy iray manontolo, araka ny fanamafisany hatrany.
Mitontona ato ankatoky ny fifidianana solombavambahoaka ity « vary mora » ity ka manahy ny maro sao ho lasa fitaovana politika hampandresena ireo kandida narotsaky ny amin’ny vovonana miara-dia amin’ny fitondrana.
Etsy ankilany, valalanina ny tantsaha sao hamono azy ireo ity « vary mora » isaky ny mihetsika ity, sao mba « zezika mora » no atao na koa tohanan’ny fanjakana ara-bola omena « subvention » toy ny hita any Eorôpa, sy ny atao amin’ny solika sy Jirama eto Madagasikara ity fambolem-bary ity.
Azo atao rahateo ny mividy vary vokatra eto an-toerana dia tsinjaraina amin'ireo izay sahirana, sady mahazo tombony amin'izay ny tantsaha Malagasy, no ho voky ireo sahirana, ny vola vahiny tsy mivoaka mamelona ireo tantsaha any ivelany.